Date My Pet » 10 Zvikonzero nei Cats anopfuura vakomana
kubudikidza Tegan Jones
Uri kuendepi kuti padanho muupenyu paunenge kufunga Negima, purring shamwari akuchengete kambani? Usanyara; kurigamuchira. Cats ndedzokufungidzira, uye ndaienda kure kuti muzviitiko zvakawanda, vari nani kupfuura vakomana. chokwadi, havasi kukwanisa kuzadzisa panyama zvinhu (kuti zvisiri izvo isu airevei Date My Pet), asi ndizvo Indaneti, yazvino uye makadhi dziri. Vangatibatsira sei ari kupa iwe rudo, boka rose yakawanda kuseka. Vanhu vanogona achakandira 'kupenga katsi mudzimai' kunongedza kumativi ose zvavanoda, asi pane zvakawanda hilariously generalized zvikonzero kusarudza katsi pamusoro mukomana.
1. Ivo Kashoma dzinorasa Mark
photo by nherera CC
Munoziva kuti ndiri kutaura pamusoro zvimbuzi pano, vakadzi. Cats Kazhinji chinopa chaiwo kana toreva aiming.
2. Ivo vanoramba Well Groomed
Cats chaizvoizvo hanya nechitarisiko chavo uye varambe pachavo kutarira zvakanaka. chokwadi, vamwe refu vhudzi dzinoita vanoda okuwedzera Kukwesha, asi zvinenge ivo kunakidzwa.
3. Havachina Low Maintenance
katsi zvose vanoda kurara, chikafu, pats uye vanomuda. hamungambovi kugadzirisa kwacho kuri dzakaipa, mupfungwa kuregeredza kana Tuning kupinda TurtleMan, Duck youmambo kana chero zvimwe crap vakomana vachiri kunakidzwa vakarindira.
4. Ivo Kukunyaradza Kana uchirwara
Cats vane yechitanhatu pfungwa kana totaura chirwere, uye kazhinji zvikuru anonyaradza uye rudo kana muridzi wavo anorwara. Juxtapose ichi nomunhu dzidziso imi saka havafaniri kubata Man flu uye unogona kuona nei katsi ndiwo mukuru sarudzo.
5. Vanoramba You Warm
katsi Your haazotongi kana kutama kubva kwamuri nokuda zvinotyisa icicles ungazviti nezvigumwe. Vari kufara kuti snuggle uye urambe iwe rechando tsoka inodziya.
No mai vomudzimai anopenga ari ndinoiitawo rakakura mubhuku rangu.
7. Pats uye Only Pats
Havatarisiri chinhu kubva kukwiza muviri. Munoziva zvandinoreva kubudikidza kuti, naanamai.
8. Havaruramisiri Your madyiro
Kuita 1am tudyo kubva nzungu ruomba, chokoreti chips ane chipunu? A katsi achava pasi pamwe kuti. Kwete kushora nezviso kana unsubtle zvahungava hwakaita pamusoro yokurovedza muviri memberships pano.
9. No Ndebvu muna Sink
Hongu, kuti pun haana kuitika. Unogamuchirwa.
10. Zviripo Access To Ravo Medical Records
Zvinoita creepy, uye Handitombobvumirani achinyatsoita kuti. Asi unofanira kubvuma kuti zviri kuziva pane haashamisi VD vanaamwene wako feline shamwari Negima.